Intsha namuhla ingangeni kuphela ukufunda, kodwa futhi echitha isikhathi esiningi kuma-nightclub, abangane, osebenza nabo, ngokuvamile kwakuba sendaweni evulekile noma ema-disco. Intsha kunzima ukwaba kahle lungamandla abo, futhi ngalobo busuku uzizwe futhi bekujabulela amandla, ngokuvamile ukuthola futhi ephuza iziphuzo energy.
Kuyinto isishayo besikhathi sethu! Abantu abasha kusuka ebuntwaneni kuthiwa ubhidliza impilo yabo, futhi kanjalo akulona best wanamuhla, ikakhulukazi ezindaweni zasemadolobheni.
Ngokwesilinganiso, intsha yanamuhla uqala ukuphuza utshwala kusukela engu-13 kuya ku-16, babona umuntu emi kukhasa menacingly phansi eminyakeni yamuva. Futhi utshwala, kuhlangene amandla, - ukuthi wonke ushevu kwabasha, njengoba umzimba usakhula.
Ukukhangisa, kontanga Ngokwesibonelo, isiko, isifiso sokuba "cool" - lezi ezinye nje sezizathu ukuthi kushukumisele nsizwa idatha isiphuzo. amalebula Bright emaphaketheni stylish, sithola umoya opholile ezikhohlisayo - konke lokhu ikhanga abantu abasha. Futhi manje iqembu akuyona wangaba namandla.
Abanye abantu ukusebenza ngezikhathi "ngazimbili", abafundi "nobusuku ngabunye" nokunye. D. onogada abasebenza ebusuku futhi emini ehlezi izincwadi. Isikhathi nokuphumula nokulala banayo cishe akekho. Khona-ke phendukani nihambe amandla. I izingane zicabanga ukuthi iholide, isikhathi esincane nabo uzodinga ukulala, nekghono ukwanda. Kodwa akunjalo!
Ukusetshenziswa iziphuzo energy - uhlobo sezikhathi, okuthiwa "amandla" uya ngokuya uba eyathandeka phakathi intsha yanamuhla. Kuphela kule minyaka embalwa edlule ukusetshenziswa uphuzo ezifana "Jaguar" liye landa izikhathi amahlanu! Lesi sibalo esongelayo, ucabangela ukuthi isiphuzo enjalo adliwe ikakhulukazi intsha kanye nabantu abasha kakhulu. iziphuzo okunjalo - akusiyo soda, futhi cocktail ngokwanele ezimbi.
Indaba yalezi iziphuzo
Ngo-1929 e-Great Britain yasungulwa ngowokuqala amandla isiphuzo, okuyinto ebekiwe iziguli ukuze lulama esibhedlela. Ngo-60-yalolucwaningo ka XX leminyaka in Japan kwase kunesiqiniseko ukukhiqizwa ucishe mass amandla kodwa edayiswa amabhodlelo amancani, futhi umthetho ngokuqinile fixed, ebekiwe okuqukethwe caffeine. Futhi yasungulwa ngo-1987, kwaziwa yibo bonke isiphuzo redbull, owanqoba nasithakazelo komuntu sabantu abasha of yonke le mbulunga.
Ngempela: ulungiselela izivivinyo noma ukuchitha isikhathi ngesikhathi disco, ngakho-ke kubalulekile ukuba sihlale siphapheme isikhathi eside futhi ungalokothi usukhathele. Ngeshwa, ubungqabavu iziphuzo ezifanayo zinikeza eyesikhashana. Indoda ithatha isimo ephakanyiswe ngesikweletu ngokwakhe, ayenakho isifiso ukwenza okuthile, ukwenza futhi ukucabanga, kodwa ikufanele inkohliso, empeleni bese wenza loan ukukhokha izikweletu kanye ukukhokha ngokugcwele yonke inzalo ngesimo sezempilo elahlekile.
"Jaguar" - sansuku amandla ithandwa kakhulu ezikhathini zanamuhla. Nakuba zikhona ontanga yakhe okwamanje.
"Jaguar" isiphuzo. isakhiwo
Manje siyathola ukuthi iyathandwa lesi siphuzo, kanye uhlu izithako kusuka kulo yakhiwa. Ngakho, "Jaguar" - i notshwala - yebo, ngisho nelimazayo ezingaphezu kuka Energy non-utshwala. Ukwakheka amanzi awo kufika. Azikho izikhalo. Okulandelayo - fructose isiraphu noma ushukela, kulezi izingxenye ibonakala lutho sahlazo, kodwa ushukela aziwa neqhaza ukuthengwa isisindo okweqile uma idliwe njalo.
Uma sicabanga ukuthi amasiko lwazo zonke izinto ezisohlwini wehla oda zenani, kulandele ETHYL utshwala, okungukuthi, kungcono cishe ingxenye eyinhloko isiphuzo. Liqinisekisa umakhi ukuthi Jaguar iziphuzo zenziwa ngaphandle nezivimbelakuvunda kanye udayi okusekelwe izithako yokufakelwa, kodwa flavour, flavorings, "Orange" futhi "Jaguar" e isiphuzo isekhona.
Ekupheleni uhlu (kodwa kungakhathaliseki ukuthi inani elincane?) Iqukethe-caffeine. Lona omunye izinto eziyingozi kakhulu. Futhi ukuthi kuvusa umuntu ngoba umlindelo omude, kodwa itjhuguluko engekhe yalungiseka kuthinta inhliziyo. Eminyakeni yamuva zithandwe ngisho zekhofi, ukuntuleka engasindi caffeine. Ngakho kungani idume kangaka "Jaguar" - isiphuzo, ngemiphumela lapho ukusetshenziswa kungaba engelapheki?
Okokuqala, isici esiyinhloko siwukusiza imfashini. Okwesibili, ukunambitheka isiphuzo: khona kungakwenza umlutha. Kuyinto emnandi futhi oludakayo, ngemva ukusetshenziswa kwaso sengathi izinkinga amanzi anciphe. Kodwa eqinisweni akusiyo. "Jaguar" - ongaphakeme-utshwala isiphuzo, yebo, kodwa lokho akusho kwenze ukuthi ungabi yingozi.
ngokukhethekile kufanele kube ezifana isici isakhiwo ngokuthi "Vitamin premix" omenzi cocktail esasihlangene wathembisa ukuthi umkhiqizo iqukethe amavithamini ezifana C, B amavithamini, i-folic acid, nabanye. Kodwa cabanga ngalokho kusho ukuthini ukweqisa izidakamizwa into! It ephahlwe i umzimba beya kungabangela lutho olubi esingaphansi kakhulu ngenxa yokuswela amavithamini!
Ngakho, lesi siphuzo "Jaguar" iqukethe, ngaphandle kwamanzi, flavour yokufakelwa, yemvelo Umbala ejenti, i-caffeine, amavithamini, futhi ETHYL utshwala.
Endaweni ehlukile, ngasinye salezi izingxenye, mhlawumbe, akukho lutho olungalungile ikakhulukazi nalo. Kodwa ndawonye ziba ezinzima kakhulu.
Umthelela isiphuzo ukusetshenziswa
"Jaguar" - isiphuzo nomkhiqizi lithembisa ukuthi sethu sokuqala intsha umoya wesibili. Ebusuku izincwadi, kunye, kubili, ezintathu kojeke amandla - kubonakala ukuthi ukuze. Ngaphambili, abafundi bephuza ikhofi, futhi waxwayisa umonakalo obangelwa-caffeine. Futhi nightclub njengoba intsha abatholayo baphuze isiphuzo "Jaguar" njengoba soda?
Imininingwane ingatholakala kwi-website umakhi olusemthethweni ukuthi ukusetshenziswa utshwala kufanele kube qotho, futhi akukho Kunconywa ukuphuza angaphezu kwelilodwa imbiza ngosuku. Kodwa cabanga ukuthi bekuzokwenzekani uma ingane efanayo uyodla isiphuzo "Jaguar", ukubunjwa okuyinto neze, nsuku zonke! Phela, kungenzeka imikhuba umlutha! Lapha, iyiphi njalo is ngokucacile singazuzi. Kodwa kuhle ukuthi umenzi uyayikhathalela imithetho ukusetshenziswa imikhiqizo yayo.
Umklamo lamabhange - ebumnyameni, ne neon decor - Waba wuphawu uthanda ukuphila. Isiphuzo "Jaguar" - stylish, elikhanyayo, ezikhangayo, elimazayo. Lezi zincazelo zimi okungcono esilandelayo siveza uhlamvu komkhiqizo. notshwala yaqanjwa isilwane, okuyinto kubhekwa sezitimela ezinejubane kakhulu emhlabeni. "Futhi uzoba nje kuqine futhi fast!" - sengathi izithembiso umakhi.
"Jaguar" - isiphuzo elimazayo. Njengazo zonke iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza cocktail, ke depresses isimiso sezinzwa futhi kubangela inhliziyo ukusebenza kabili okukhulu. By the way, ukuphuza ikhofi kusukela kuya kwemithathu izinkomishi ngosuku kakhulu ukubuyeka eziyingozi kweyodwa amandla ebhange.
Ukusetshenziswa njalo lokhu isiphuzo - kuyinto ingozi exacerbation izifo ezingamahlalakhona. Engasenamahloni wonke umzimba - kusukela izinso futhi isibindi ebuchosheni, ne-caffeine ukweqisa izidakamizwa kungaholela kuze kube ngisho nasekufeni.
Amantombazane asemancane wadlula izwi kolwazi ngomlomo okusolwa ukuthi amandla iziphuzo ezifana "Jaguar" ukusiza ukunciphisa umzimba, kodwa lokhu akulona iqiniso. Phela, isiphuzo iqukethe ushukela eliningi eside! Njengoba sazi, kusukela izidakamizwa ukunciphisa umzimba akusebenzi. Futhi ngaleso sikhathi, njenganoma iyiphi isiphuzo utshwala "Jaguar" kuyinto iphango elidinga ukwaneliseka. Bese kuthi-ke amantombazane uqale ukuwadla chips, sandwich noma amabhega, futhi, ngokufanelekile, uthole amafutha.
Kuyishwa ukuthi ngokuvamile abantu abasha baphuze amandla, kuphela intela ukuze imfashini. kwakhiwa Fashion njengoba lokhu kusukela Amathrendi zomculo, kusukela ukuxhumana nomphakathi kusuka ezihlukahlukene intsha nemikhutshana kuleso.
Ukuphuza isiphuzo carbonated, njengoba wazi, okuningi ngokushesha lwalo emfudlaneni igazi kuka evamile, futhi ngenxa yalokho ukulimaza kusukela lidlula njengoba ngaphansi khulu.
Umkhiqizi "Jaguar" isiphuzo
Umkhiqizi "Jaguar" isiphuzo has website yayo siqu isiRashiya, elalihlotshiswe ngempela stylish, tones emnyama isici neon izithombe. Isayithi inikeza ukwaziswa okuningiliziwe ukubunjwa umkhiqizo, mayelana nemithetho yokusetshenziswa kwawo, ngomlando ukukhiqizwa lusukela iminyaka engaphezu kwamashumi amabili. Ngokukhethekile zabelwe isimo sendawo yokuthengisa. Kuyinto Russia, Georgia, Tajikistan, Abkhazia, Armenia, Azerbaijan, Ukraine, Latvia, Kyrgyzstan nakwamanye amazwe.
Kuphela kwi website esemthethweni ye-isiphuzo kungekho ulwazi mayelana nomkhiqizi. Lapho ekhiqizwa "Jaguar '? Yini igama umenzi isiphuzo? Lolu lwazi ayitholakali. Kuyinto eyisimanga impela, akunjalo? Ngokuqinisekile, lokhu kuyimfihlo elikhulu obalulekile?
Umenzi ubiza izinhlobo ezintathu isiphuzo "Jaguar". Lona standard (wokuqala), "ultra-ekukhanyeni" (ie, lihunyushwe kwelesiHeberu elithi ngesiNgisi "lula") futhi "Igolide" ( "igolide" enguqulweni). Ukwakheka zinhlobo cishe ezifanayo.
I "segolide" wanezela orange yemvelo juice. amandla salo 7%. Kuyinto okungaphezu kokujwayelekile castle ungqa!
Inguqulo ka "ultra-ekukhanyeni" aqinile - 7.2% utshwala. Lapha kuba nje kohliso onikezwe ukuma ukunakekelwa: kunenkolelo ukuthi "ukukhanya" kulula. A "ukukhanya" kungaba kuphela ukunambitheka. Cabanga version esiqine kunazo "Jaguar" yakhelwe amantombazane!
"Original" - ukunambitheka elula isiphuzo, berry, caramel, nge isizinda cocktail. Umholi ongenambangi yokuthengisa zonke izinketho ezintathu.
Ngakho, kusukela phezulu singaphetha ngokuthi lo "Jaguar" - isiphuzo ethandwa, ikakhulukazi entsheni, okuyinto intela ukuze imfashini. Esikhathini amakilabhu, ngenkathi silungiselela izivivinyo, kuyilapho itoho ebusuku isikhathi lubaluleke, ngokuvamile kubonakala ezandleni zabantu abasha.
Nomfutho depresses kwemizwa uhlelo, izinso, inhliziyo. ukusetshenziswa njalo non-kwesejwayelekile kungaholela kuze kube ngisho nasekufeni. "Jaguar" - isiphuzo, ngemiphumela lapho ukusetshenziswa kungalululaza impilo sonke isizukulwane abantu!
Ngesikhathi ukusetshenziswa iziphuzo kuhlanganyela kudingeka siqaphelisise impilo yabo, futhi ikakhulukazi athobele umthamo (akukho isiphuzo ezingaphezu kweyodwa a amabhange usuku). Futhi, noma kunjalo, ungaphuzi isiphuzo nsuku zonke, hhayi ukuba umlutha. Utshwala, amandla ethuthukisiwe, akuyikukusiza, ngaphandle impumuzo yesikhashana isimo sakho. Futhi baphaphame futhi ashona amabhethri yakho, ewusizo kakhulu ukuphuza itiye ulamula kanye namakhambi.